Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Russia » Conlọ Ọrụ Mgbakọ Russia na-ekwupụta ọkwa ọhụrụ
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Sagid Zaremukov na-eche ihu ọrụ nke imepewanye mmemme nke mkpakọrịta na imekọ ihe ọnụ ụlọ, na-akwalite ike mmemme obodo na mpaghara ya, na-akpụpụta atụmatụ mba ụwa nke RCB, yana imejuputa atumatu imepụta netwọkụ mpaghara. Ụlọ ọrụ Congress.
Ntọala nke Sagid Zaremukov nwetara nkwado 100%.
Ọhụrụ isi nke RCB nwere ihe karịrị afọ 15 nke ahụmịhe na nnukwu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ihe omume.
Ọ bụ ọkachamara amaara nke ọma nzere nke gọọmentị nke Russian Federation.
Nhọpụta onye ntụzi ọhụrụ nke otu a mere n'ime usoro nke ọgbakọ izugbe nke Ụlọ Ọrụ Mgbakọ Russia (RCB) ụlọ ọrụ ndị otu, nke mere na July 9, 2021 na saịtị Cosmonautics and Aviation Center (VDNKh, pavilion 34). Dika nsonaazụ ntuli aka, ntuli aka nke Sagid Zaremukov nwetara nkwado 100%.
Ọhụrụ isi nke RCB nwere ihe karịrị afọ 15 nke ahụmịhe na nnukwu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ihe omume. Tupu isonye na Ọgbakọ Mgbakọ Russia, ọ nwere ọkwá ndị isi na RESTEC Group of Companies, otu n'ime ndị isi na mgbakọ Russia na ahịa ngosi. Na 2018, Sagid Zaremukov sonyeere ndị otu nke Ụlọ Mgbakọ Russia wee soro ndị isi gọọmentị etiti na mpaghara, yana ndị otu azụmaahịa na ụlọ ọrụ dị na ụlọ ọrụ ihe omume obodo, na -anọchite anya ọdịmma nke ndị otu RCB na ngalaba gọọmentị na mkpakọrịta ọha na eze azụmahịa. mmepe ụlọ ọrụ. Kemgbe Machị 2021, ọ bụbu onye ntụzi ọrụ nke RCB. Ọ bụ ọkachamara amaara nke ọma nzere nke gọọmentị nke Russian Federation.
N'ime nkọwa ya, Sagid Zaremukov kwuru na atụmatụ dị irè nke mmekọrịta n'etiti ndị isi ụlọ ọrụ emepụtara n'ime afọ nke ọrụ Association, imekọ ihe ọnụ na ọfịs mpaghara, ụlọ ọrụ na -eduga na mkpakọrịta ọha ga -aga n'ihu. Sagid Zaremukov kwuru, "Anyị ga -achọkwa usoro ọhụrụ nke ọrụ ọnụ iji zụlite ahịa ihe omume Russia na ijikọ ụlọ ọrụ ahụ."
N'ime usoro nke nzukọ izugbe nke RCB, a tụlekwara ọtụtụ okwu nhazi nke metụtara ọrụ otu a ma kwupụta nsonaazụ nke ọrụ mmụta n'ịntanetị nke RCB “Summer Academy”. Ejikọtara ọrụ ahụ na ihe ngosi R&C na ebe nyocha yana site na nkwado nke Roscongress Foundation. Ebumnuche ya bụ inye ndị sonyere na ọgbakọ ọgbakọ na ahịa ihe ngosi ohere maka mmepe ọkachamara nkeonwe ma ọ bụ nweta ikike ọhụrụ. N'afọ a, ndị ọkachamara iri na asatọ nke ọgbakọ ọgbakọ na ụlọ ọrụ ngosi na ụlọ ọrụ metụtara ya ghọrọ ndị nkuzi na RCB Summer Academy wee kerịta ndị na -ege ntị ahụmịhe ha. Ihe karịrị ndị nnọchianya 18 nke ọgbakọ ọgbakọ na ahịa ngosi ghọrọ ndị na -ege ntị na oru ngo "RCB Summer Academy". Na saịtị VDNKh, e nyere ndị gụsịrị akwụkwọ diplọma na ekele nye ndị nkuzi RCB Summer Academy.
JSC VDNKh, NEGUS-Expo na ụlọ ọrụ nri Prazdnik Vkusa ghọrọ ndị mmekọ nke Nzukọ Ezumezu nke Ọgbakọ Mgbakọ Russia. Emere njem nlegharị anya nke Cosmonautics na Aviation Center maka ndị sonyere na Nzukọ Ọgbakọ, yana n'oge nyocha saịtị ahụ, e gosipụtara ọgbakọ ọgbakọ na ikike ngosi nke saịtị VDNKh.